मलाई कोही केटीले पत्याएनन्’ : टेन्सनमा राजेशपायल राई « हाम्रो ईकोनोमी
मलाई कोही केटीले पत्याएनन्’ : टेन्सनमा राजेशपायल राई
राजेश पायल राईलाई फ्यानले भर्सटाइल गायक पनि भन्छन् । उनी देश तथा विदेशका कार्यक्रममा प्रायः व्यस्त रहन्छन् । राजेश पायल राई भन्नबित्तिकै धेरैलाई ‘दर्शन नमस्ते’ बोलको गीत याद आउँछ । यी गायकले बिहे भने गरेका छैनन् । उनलाई फ्यान र मिडियाले भने बेलाबेलामा सोध्ने गर्छन्, बिहे कहिले गर्ने ?
राजेश पायल राई भने यो प्रश्न स्वभाविक भएको धारणा राख्छन् । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भने, ‘खै १ मलाई कोही केटीले पनि पत्याइरहेको छैन, म पनि चाहन्छु कि अब मेरो बिहे होस् ।’
गीतकै क्षेत्रमा निरन्तर लागिपरेका गायक राईले चलचित्रका गीतमा पनि स्वर दिएका छन् । केही समयअघि राई र नायिका रेखा थापा प्रेम सम्बन्धमा रहेको चर्चा चलेको थियो । केही मिडियामा त यी दुईले बिहे गर्ने पक्का भइसकेको खबर पनि बाहिर आएको थियो ।
राईले अन्तर्वार्तामा रेखा थापासँग बिहे गर्न आफूलाई कुनै आपत्ति नभएको पनि बताएका थिए । पछि यो कुरा यत्तिकै सेलाएर गयो ।गायक राई अब भने कुनै युवतीसँग बिहे छिट्टै हुनेमा विश्वस्त छन् । उनी आश्वस्त हुँदै भन्छन्, ‘फ्यानको आशीर्वाद छ मलाई । बिहे पनि छिट्टै हुन्छ ।’
७२ वर्षे पठाओ ‘राइडर’
हेलो ! बुवा नमस्ते । मंगलमान महर्जनको नम्बर डायल गर्दा दिनको त्यस्तै